Tag: miralenta | Martech Zone
Ny lehilahy sy ny vehivavy ve tia loko hafa?
Alahady Oktobra 25, 2015 Alahady Oktobra 25, 2015 Douglas Karr
Nasehonay ny infografika tsara momba ny fiatraikany amin'ny fividianana loko. Kissmetrics koa dia namorona infographic izay manome fampidirana vitsivitsy amin'ny fikendrena ny lahy sy ny vavy manokana. Gaga aho tamin'ny fahasamihafana… ary io volomboasary io dia noheverina ho mora vidy! Ny zavatra hita hafa momba ny loko sy ny volon-koditra dia ny loko ankafizin'ny lahy sy ny vavy indrindra. Green dia miteraka fahatsapana ny fahatanorana, fahasambarana, hafanana, saina ary angovo. Ny lehilahy dia mirona amin'ny loko marevaka kokoa, raha
Tatitra momba ny demografika maimaimpoana? Misaotra Facebook!
Alarobia 5, 2015 Sabotsy, Janoary 14, 2017 Douglas Karr
Efa te-hahazo mombamomba ny demografika tsara ho an'ny mpanjifanao na mpizara mailaka anao ve ianao? Mandoa vola kely ny orinasa handefasana ny lisitr'izy ireo amin'ny orinasa hampifanaraka sy hanome ny mombamomba ireo adiresy mailaka amin'izy ireo. Ny marina dia, tsy mila izany ianao! Facebook for Business dia manana tatitra matanjaka be - ary tsy handany denaria iray akory ianao. Amin'ny fampiasana fitaovana Facebook ho an'ny Mpihaino Manokana, azonao atao ny mampakatra ny lisitry ny mailakao avy eo ary mihazakazaka avy eo
Maninona ny vehivavy no tena hery ao ambadiky ny media sosialy
Alakamisy 6 martsa 2014 Alakamisy, Jona 18, 2015 Douglas Karr
Mandritra ny ora faratampony, saika 76 amin'ireo mpampiasa an-tserasera izay ao amin'ny Facebook no vehivavy tokoa, ary manavao ny satan'izy ireo ao amin'ny Twitter sy Instagram matetika kokoa noho ny lehilahy. Ity dia endrika mahaliana iray tokony hodinihina, ary mety ho maro ny marika manintona na mikendry vehivavy raha ny momba ny fampielezan-kevitr'izy ireo amin'ny Internet. Mampiseho ity infographic ity fa tsy ny vehivavy ihany no mampiasa matetika ny media sosialy noho ny an'ny lehilahy, fa ireo tranonkala ireo no ampiasain'izy ireo
Fahazarana ho an'ny mpanjifa miorina amin'ny lahy sy ny vavy
Alatsinainy Martsa 5, 2012 Douglas Karr
Ireo olona ao amin'ny G + dia nametraka infographic mba hanomezana ny nuansa sasany momba ny fahazarana mpanjifa voafaritra manokana. Na dia eo amin'ny tontolon'ny fiantsenana an-tranonkala ankehitriny aza, dia mbola mihatra ilay fomba fiteny taloha izay tian'ny vehivavy miantsena mihoatra ny lehilahy. Na amin'ny Internet na amin'ny Internet, ny vehivavy dia manapa-kevitra tsy tapaka amin'ny fividianana bebe kokoa ary amin'ny ankapobeny dia manome lanja ny traikefa amin'ny fiantsenana noho ny lehilahy mpiaramiasa aminy. Ireo mpivarotra an-tsaina dia mahafantatra fa tsy maintsy ampifanarahan'izy ireo amin'ny mpanjifany lasibatra ny hafatr'izy ireo, ka androany isika
Ity no fomba hitenenanao fisaorana tsy misy teny!
Alatsinainy Janoary 7, 2008 Alatsinainy Janoary 7, 2008 Douglas Karr
Fanentanana mahafinaritra sy hevitra tokony horaisina ho an'ny olona manao fanamiana mahafoy ny fotoanany, ny fianakaviany ary ny ainy mihitsy aza ho antsika. Ny fampielezana fankasitrahana: tsindrio ny horonan-tsary.